पशुपंक्षीको मुटु, कलेजो खादा स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ त ! यस्तो छ डाइटिशियनको सुझाव - Samachar PatiSamachar Pati
पशुपंक्षीको मुटु, कलेजो खादा स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ त ! यस्तो छ डाइटिशियनको सुझाव
१९ कार्तिक l
मासुमा रुची हुनेहरुका लागि पशुपंक्षीको मुटु, कलेजो, फोक्सो पनि निकै स्वाद लाग्छ । यस्तो परिकार बनाउने काइदा पनि फरक हुन्छ । यद्यपी मन खोलेर भने खान हच्किन्छन् । कारण, यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा असर गर्छ कि भनेर । खासगरी कलेजोको सन्दर्भमा धेरैले डर मान्छन् । पशुपंक्षीको कलेजो धेरैको मनपर्ने परिकार हो । तर, यसको सेवन गर्दा हानी गर्छ भन्ने डर धेरैलाई छ । उनीहरुलाई लाग्छ, पशुपंक्षीको सबै रोग एवं विषक्त तत्व कलेजोमा जमेर बसेको हुन्छ । जब हामी कलेजो सेवन गर्छौं, साथसाथै त्यसमा रहेको विषाक्त तत्व पनि ।
के हो त सत्य खाँट्टी कुरा अर्कै छ
कलेजोको काम शरीर विभिन्न प्रकारका विषादीलाई शरीरबाट निष्कासन गर्नु हो । यही कारण पनि मानिसहरुमा यस्तो भ्रम हुन स्वभाविक हो ।
गाँठी कुरा त के भने, कलोजोले शरीरमा जम्मा हुने विषाक्त तत्वलाई निष्कासन गर्ने भएपनि यसले सञ्चय गरेर राख्दैन । अर्थात विष कलेजोमा जमेर बस्दैन ।
उदाहरणका लागि, मदिरा सेवन गर्दा त्यसमा रहेको हानिकारक तत्वले कलेजोलाई क्षति गर्छ । तर, मदिराको विषाक्त तत्व कलेजोमा जमेर भने बस्दैन ।
बुझ्नैपर्ने अर्को कुरा त के पनि भने, विषाक्त रसायनहरुलाई शरीरबाट निष्कासन गर्नका लागि कलेजोले त्यस्ता रसायनलाई पानीमा घुलनसिल बनाउँछ । ती रसायनहरु रगत हुँदै मिर्गौलामार्फत पिसाबको माध्ययमबाट वाहिरिन्छन् । स्वास्थ्य परीक्षणमा रगत र पिसाब जाँच गर्नुको कारण पनि यही हो । यसबाट शरीरमा बन्ने र प्रवेश गरेका विषधीहरुको वारेमा पत्ता लाग्ने गर्छ ।
कलेजो एक ‘सुपरफुड’
– समाजमा पनि कलेजोलाई उर्जा प्रदान गर्ने पदार्थको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले मानिस कमजोर हुँदा कलेजो सेवन गरेको पाइन्छ ।
– कलेजोमा प्रचुर मात्रामा पोषक तत्व हुन्छ । त्यसैले कलेजोलाई पोषणविद्हरुले ‘सुपरफुड’ पनि भन्ने गर्छन् ।
– कतिपय रोग निको पार्नकै लागि पनि कलेजोको सेवन गरिन्छ । क्यान्सर, मुटु, टि।बी। जस्ता रोगबाट ग्रसित मानिसहरुले कलेजोको नियमित सेवन गर्नुपर्छ । यस्ता रोग निको पार्नका लागि कलेजोले विशेष भूमिका खेल्छ ।
– कलेजोलाई यसलाई विभिन्न थेरापीमा पनि प्रयोग गरिदै आइएको छ । कलेजोको सेवनबाट गराईनेमध्येको एउटा थेरापी हो, ग्रेसन थेरापी । यस्तो थेरापीमा कलेजोलाई जुुसको रुपमा सेवन गराइन्छ ।
– कलेजोलाई स्याउ र गाँजर भन्दा बढी पोषिलो खाद्यपदार्थको रुपमा लिइन्छ ।
अत्याधिक भिटामिनबी १२
विशेषगरी भिटामिन बी १२ को कमी साकाहारीमा हुने गर्छ । कलेजोमा भने यसको मात्रा अत्याधिक हुन्छ । भिटामिन बी १२ ले रक्त कोष निर्माणमा मद्दत गर्छ ।
भिटामिन बी १२ को कमिले रक्तअल्पताको समस्या निम्तन सक्छ । यो भिटामिनले शरीरको कोषहरुमा हुने डि।एन।ए लाई उचित ढंगबाट काम गर्न प्रेरित गर्छ । त्यस्तै यसले मष्तिस्कको कार्यक्षमता चुस्त बनाउन, अल्जाइमरबाट बचाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
कलेजोमा भिटामिनबी ६, बायोटिन र फोलेट प्रचुर मात्रामा हुन्छ । फलेटको कमीले पनि रक्तअल्पता हुने गर्छ ।
– खानाबाट शरिरमा प्रवेश गरेको भिटामिन ए कलेजोमा जम्मा भएर बस्ने गर्छ । जसलाई चाहिएको अवस्थामा पछिसम्म पनि प्रयोग गर्छ । त्यसैले हामीले कलेजो सेवन गर्दा सँगै भिटामिन ए पनि लिन्छौँ । भिटामिन एको कमीले हामी धेरैलाई थाहभएको काम भनेको यसले रतन्धोको समस्या निम्त्याउछ । यो भिटामिनले शरिरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउँछ । यसले छालाको बृत्तिविकास गर्नुका साथै छालाई चमक दिने काम गर्छ ।
जुन हानिकारक हुन्छ
यद्यपी बन्द कोठामा विभिन्न औषधि, हर्मोन, असुद्ध खाना खुवाएर हुर्काइएको पशु(पंक्षी विषादी कलेजोमा मात्र नभई मासुमा पनि बस्ने गर्छ । त्यस्तै प्रकारका पशुपंक्षिको कलेजो सेवन गर्दा भने स्वास्थ्यमा असर पर्न जान्छ ।
स्पाः आराम, आनन्द र उपचार
पत्रकार तिलक पुनलाई पितृशोक